HGH Turkey - Genotropin GoQuick 12mg 36 IU na Turkey maka ire ere
1 pen x 36 IU (ọ bụ azịza zuru oke maka ndị mbido) - $ 510 USD 2 pensụl x 36 IU (ọ bụ azịza zuru oke maka ndị mbido) - $ 980 USD 3 pensụl x 36 IU (ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1/3 nke usoro zuru ezu) - $ 1,445 USD 4 pensụl x 36 IU - $ 1,880 USD 5 itienna x 36 IU (ọkara N'ezie) - $ 2,295 USD Ihe na-ekpo ọkụ! Zụta mkpịsị akwụkwọ 5 nweta 1 n'efu! x 36 IU (ọkara ọkara) - $ 2,295 USD 6 pensụl x 36 IU - $ 2,713 USD 7 pensụl x 36 IU - $ 3,100 USD 8 pensụl x 36 IU - $ 3,440 USD 9 pensụl x 36 IU - $ 3,815 USD 10 itienna x 36 IU (zuru N'ezie) - $ 4,140 USD Nkwalite! Zụta mkpịsị edemede 10 nweta 2 n'efu! x 36 IU (nkuzi zuru oke) - $ 4,140 USD Debanye ngwugwu 2 itienna x 36 IU kwa ọnwa + naanị na nkwụnye ego - $ 830 USD Debanye ngwugwu 3 itienna x 36 IU kwa ọnwa + naanị na nkwụnye ego - $ 1,245 USD Nkwụnye ego ntinye ego: Mee atụmatụ A, B - $ 800 USD
1 pen x 36 IU (ọ bụ azịza zuru oke maka ndị mbido) 2 pensụl x 36 IU (ọ bụ azịza zuru oke maka ndị mbido) 3 itienna x 36 IU (ọ fọrọ nke nta 1/3 nke zuru N'ezie) 4 pensụl x 36 IU 5 itienna x 36 IU (ọkara N'ezie) Ihe na-ekpo ọkụ! Zụta mkpịsị akwụkwọ 5 nweta 1 n'efu! x 36 IU (ọkara ọkara) 6 pensụl x 36 IU 7 pensụl x 36 IU 8 pensụl x 36 IU 9 pensụl x 36 IU 10 itienna x 36 IU (zuru N'ezie) Nkwalite! Zụta mkpịsị edemede 10 nweta 2 n'efu! x 36 IU (nkuzi zuru oke) Debanye ngwugwu 2 itienna x 36 IU kwa ọnwa + naanị na nkwụnye ego Debanye ngwugwu 3 itienna x 36 IU kwa ọnwa + naanị na nkwụnye ego Nkwụnye ego ntinye ego: Mee atụmatụ A, B aha
Dabere na 40 nyocha Dee a nyochaa